ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ကိုမောင်မောင်ဝမ်းရဲ့ ရင်တွင်းစကား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ ကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာ ထွက်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကြိုက်သူတွေရှိတယ်..မကြိုက်သူတွေရှိတယ်..။ မကြိုက်တဲ့ နေရာမှာလဲ…သဘောရိုးနဲ့ ဝေဖန်ထောက်ပြသူတွေရှိသလို…အခွင့်သာခိုက် ချနင်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်….။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆန္ဒအပြခံရလို့…၀မ်းနည်းနေကြတဲ့ လူထုတွေရှိသလို ၀မ်းသာနေကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်...။ တကယ်တော့ ဒီကိစ္စဟာ...တခါက ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရေးဘူးတဲ့ စာအုပ်ထဲက…မြတ်စွာဘုရားဇာတ်ကြောင်းတခုလိုပါပဲ…။ အလွန်ချစ်တဲ့သား စစ်မြေပြင်မှာ တိုက်ပွဲကျသွားတဲ့ ဆိုတဲ့ သတင်းကို….( သားချစ်စိတ်နဲ့ သေလုမြောပါး..ဖြစ်နေတဲ့ ) မိခင်ကြီးထံ…ပြောသင့်မပြောသင့်ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ပုစ္ဆာလိုပါ…မိခင်သေမှာကြောက်လို့ မပြောပဲထားရင်..မုသာဝါဒ ကံထိုက်တယ်…ပြောလိုက်လို့ မိခင်ကြီးခမျာ..၀မ်းနည်းပက်လက်နဲ့သေသွားရင်…ပါဏာတိပါတာ ကံထိုက်မယ်….ဆိုတော့..ဘယ်လိုဖြေဖြေ..ကံကျူးလွန်မူ့နဲ့ မလွတ်ဘူး…။ ဒီလိုနဲ့ မြတ်စွာဘုရားထံရောက်တဲ့အခါ….ဘုရားက အဖြေပေးလိုက်တာရှင်းရှင်းလေးပါ….ယုံကြည်ချက်နဲ့ စေတနာအပေါ်မှာပဲ…..အဖြေက တည်မှီနေပါတယ်တဲ့…..။
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကိစ္စမှာ ဒေါ်စုဟာ..ဘယ်လိုယုံကြည်ချက် ၊ စေတနာတွေနဲ့ ၀င်ရောက်ပြီး အမုန်းခံဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့..အားလုံးသိပြီးဖြစ်လို့ အထူးပြောပြမနေတော့ပါဘူး……။ ကြိုက်ခြင်း မကြိုက်ခြင်း လက်ခံခြင်း လက်မခံခြင်းများဟာ..လူတစ်ဦးခြင်းဆီရဲ့အခွင့်ရေးများသာဖြစ်တယ်…..။ ကိုယ်မြင်တဲ့ ရှုဒေါင့်ကနေ ကိုယ်ဆုတ်ကိုင်ထားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်…….။ ဒီနေရာမှာ အတိတ်ကာလတခုဆီကို နည်းနည်းရွေ့ကြည့်ချင်ပါတယ်…တခါက …လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ရဲဘော်တဦးက….မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေ ကူးထားတဲ့…ပုဂံမှာကျင်းပသွားတဲ့..ပြည်ခိုင်ဖြိုး ညီလာခံအကြောင်း ဖွင့်ပြတယ်…..။ ဒါကိုကြည့်နေဆဲ အချိန်မှာပဲ….သူဟာ ချုံးပွဲချငိုတယ်…ငါတို့တော်လှန်ရေးသွားပါပြီကွာတဲ့…..။ သူငိုမယ်ဆိုလည်း ငိုချင်စရာ…လူအုပ်ကြီးက မျက်စိတဆုံး…။ ဒေါ်စု အပါဝင်…အတိုက်အခံ အင်အားစုများကို ရှုတ်ချကြွေးကြော်သံတွေက…မိုးလုံးဟိန်းလို့….။ လူတွေဆိုတာ ကွင်းကြီးထဲမှာ ဖွေးဖွေးလှုတ် မျက်စိ တဆုံး…….အဓိက ပစ်မှတ်ကတော့…ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့…………။ လူတချို့ရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်တွေပေါ်မှာ…ဒေါ်စုနဲ့ အခုပဲ…မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့လိုက်ရင်…အပြတ်ဖဲ့ ပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ခတ်ထန်တဲ့….အသွင်ပြင်တွေနဲ့….။ မိုးယံထိတိုင် ထစ်ချုံးခဲ့တဲ့ ရှုတ်ချကြွေးကျော်သံများက..တုန်လှုတ်ဖွယ်…။ လူထု သောင်းပေါင်းများစွာနဲ့….ဒေါ်စုကို အပြတ်နှိပ်ကွပ်ခဲ့တဲ့ ညီလာခံကြီး…..။ ဦးဆောင်ကျင်းပပေးသူတွေက….အလုပ်မရှိကြောင်ရေချိုးသူတွေမဟုတ်..စစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ……။ ဒီအချိန်မှာ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်ကလည်း….အကျယ်ချုပ် ချုပ်နှောင် ခံနေရဆဲကာလများမှာ…..။
ဒီလိုနဲ့……ကာလ တခုကို ကျော်လွန်အပြီးမှာတော့…….
- မြန်မာနိုင်ငံတစင် တလျှားမှာ လူထုရဲ့အုံးအုံးကျွှက်ကျွှက်ထောက်ခံမူ့ကို ရယူနိုင်တာ ဘယ်သူလဲ…
- ရောက်ရာ နိုင်ငံတွေမှာ…..အဆင်မြင့် ဂုဏ်ပြုခံရတာ ဘယ်သူလဲ……
- ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ…..အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့တာ…ဘယ်သူလဲ….။
တကယ်တော့ လက်ပန်းတောင်း တောင် မှာ…ဒေါ်စုကို ရင့်ရင့်သီးသီး ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့…တချို့ဟာ..သွေးပူနေတုန်းမို့ပါ…။ သွေးအေးသွားလို့…စဉ်းစားလာတတ်မယ်ဆို…( အစီရင်ခံစာကို လက်ခံတာ လက်မခံတာ ခနထား )…ဒေါ်စုရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ စေတနာတွေကို နားလည်လာမှာပါ………။
ဒေါ်စုကို ဒီလို ရင်ဆိုင် ခံရလို့ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေကြသူများလည်း…သိပ် အရမ်းကြီး မခံစားပါနဲ့….။ ဒေါ်စု ဒီလိုရင်ဆိုင် ခံရတယ်…ဆန္ဒပြခံရတယ်ဆိုတာ…ပုဂံညီလာခံထက်စာရင်…တော်တော်သေးပါတယ်…။ ပုဂံညီလာခံတုန်းက…ရုပ်မြင်သံကြားကတောင် တနိုင်ငံလုံးလွှင့်တာပါ……။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေဟာ နိုင်ငံရေးမှာ သိပ်မဆန်းပြားပါဘူး….။ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သားရတဲ့ ဒေါ်စုအတွက်တော့..ဖြစ်စဉ်တခုကို နားလည်နေမှာပါ။
သေချာတဲ့ အဆိုးထဲက အကောင်းတခုကတော့….ဒေါ်စု အပေါ်မှာ အမြဲတန်းဆန့်ကျင်ဘက် အနေထားမှာ ရှိခဲ့တဲ့…သူတွေဟာ…သူရဲ့ နိုင်ငံအပေါ်မှာ အမှန်တကယ်ထားရှိတဲ့…ယုံကြည်ချက်နဲ့ စေတနာ……အလုပ်အပေါ်မှာ ပြတ်သားတဲ့ သတ္တိ….။ အမုန်းခံရဲတဲ့…သတ္တိတွေကို ဘယ်လိုမှ မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်လောက် အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာက တော့ အင်မတန်မှ ၀မ်းသာစရာပါ….။
သောက ဗျာပါဒတွေနဲ့ ဖိစီးနေရတဲ့..ရွာသူရွာသားတွေ….စိတ် လူပင်ပမ်းကြီးစွာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ဒေါ်စု….သူတို့ကို ကြည့်ပြီး…ရင်ထဲ မချိဖြစ်မိတယ်…။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ…အကြောင်းအရာတခုအပေါ်မှာ…နားထောင်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်…ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်….မကျေနပ်ရင် ဆန္ဒပြပေါ့….။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ….လူထုခေါင်းဆောင်ကို…ရွာသားတွေအားကိုးနဲ့ အခက်တွေ့အောင်…လုပ်ခဲ့တဲ့…ဟန်ဝင်းအောင်ကို လည်း တခုပြောချင်တယ်…။ မင်း ရင်ဆိုင်တဲ့သူဟာ…အင်းစိန်သီးသန့်ထောင်က ထောင်ပိုင် အရူး ချစ်မောင်…မဟုတ်ဘူး…။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်………..။ ညီလေး….သိပ်မပြောချင်ဘူး..အခု ဒေါ်စုနဲ့ ပါလာတဲ့ လုံခြုံရေး…ဒေါ်စုဘေးနားမှာ အမြဲကပ်လျှက်ရှိနေတဲ့….ကိုမောင်မောင်ဦး ( နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ) ကတော့……မင်း ကိုကြည့်ပြီး…ခေါင်းလေးတဆတ်ဆတ် နဲ့ ပြုံးနေပါလိမ့်မယ်….( သဘောကျလို့တော့မဟုတ်တန်ရာဘူး )….မင်း ဘာလည်း ဆိုတာ သိနေလို့…..။ ( ၁၉၉၆ ၀န်းကျင် မှာ ငါတို့ အင်းစိန် သီးသန့်ထောင် ရဲ့…တိုက်ခန်းတွေမှာ အတူနေခဲ့ကြဘူးပါတယ်…ဘယ်သူ ဘာလဲ..သိပါတယ် )။
( ဟန်ဝင်းအောင် )….လက်ပန်းတောင်းတောင် ကိစ္စမှာ…ဒေါ်စု ဦးဆောင်တဲ့ ကော်မရှင်ရဲ့…ဆုံးဖြတ်တင်ပြချက်ကို…အထက်မှာဖော်ပြခဲ့သလိုပဲ…ကြိုက်ခွင့်..မကြိုက်ခွင့်..ထောက်ခံခွင့် မထောက်ခံခွင့်ရှိတယ်….ဒါဘာမှ မဖြစ်ဘူး…လက်ပန်းတောင်း တောင် ကိစ္စကိုပဲ ဆက်လုပ်လုပ်…တကမ္ဘာလုံးအတွက်ပဲ လုပ်လုပ်…ဒါ မင်းသဘော…..။ဒါပေမဲ့..လူထု ခေါင်းဆောင်ကို စော်ကားခွင့်မရှိဘူး…။ ထပ်ပြောမယ်….သဘောထားကွဲလွဲခွင့်ရှိတာ…ဒီမိုကရေစီ အနှစ်သာရ..စော်ကားတယ်ဆိုတာ…အောက်တန်းကျတာ